Gweta Iwo matatu akanakisa mafirimu aRobert de Niro › 3
Robert de Niro's top 3 mafirimu
Ngatikanganwei nezve wekupedzisira Robert de Niro kumutsa mumwe mutambi mukuru waaive pane imwe nguva. Inogona kunzwika seyakaomarara asi ichokwadi, imwe yemhando dzinoshamisa dze celluloid yakapfuura nekurwadziwa kwakawanda kupfuura kubwinya kwemafirimu pasina iyo poindi yekirasi cinema iyo mamwe mafirimu atozvarwa.
Ichava nyaya yesarudzo dzakaipa kana kusaziva nzira yekurega basa nenguva. Kana kuti ingatova imhaka yezvimwe zvikwereti zvinofungidzirwa zvakamuita kuti agamuchire marudzi ose amapepa. Chinhu ndechekuti nepo "mhandu" yake yekuidaidza nenzira epic, Al Pacino, yakapiswa mukufungidzira kwakakurumbira se totem yekududzira, shamwari yaNiro iri kurasikirwa neiyo aura yengano pakufora kwekumanikidzwa.
Chokwadi panenge pave kuti haugutsikane nekufunga kwangu izvi. Nekuti zvekuravira kune mavara uye kunyangwe mumakomedhi ake achangoburwa anoziva mafambiro ane solvency yeNiro. Ndiani akanga anyima. Asi ndizvo zvinotarisirwa, semukuru Clint Eastwood, vakaita sembongoro, munhu wese ane imwe...
Top 3 Yakakurudzirwa Robert De Niro Movies
Pane imwe nguva apo Robert de Niro akaratidzira hunyambiri uhwo Scorsese hunonakidzwa nahwo zvakanyanya kutimutsa kunenge kuripo. Chiso chine hushamwari chakashanduka chakasviba pasina kudiwa kwezvimwe zvinokonzeresa pane kutendeuka mukutaridzika kwezvakanaka de Niro.
Kune kumwe kupengesa kukakavara mukunzwira tsitsi ne psycho pabasa. Nekuti pamwe zano reScorsese mubhaisikopo iri nderekuti, rakafanana nekupenga. Asi kune pfungwa zvakare inonongedza kune kuyananiswa kunobvira nenyika pese apo chinangwa chinogona kuiswa chekuchengetedza kubva pakutsva.
Iris, musikana ane pfambi ndiye chete anchor yaTravis Bickle (De Niro) kuti arege kuzvipa zvizere kusvika kune nyika inomukwereta zvese. Semurwi wehondo, Travis anotsvaka kukunda marwadzo ake, izvo zvingangotungamirira mukuzviparadza, achigara mumimvuri yeNew York kubva mutekisi yake. Iye chete ndiye anoonekwa seanonangwa kune zvakabiwa kuchena uye kusava nemhosva. Travis anozviziva kuti akarasika asi pwere yaIris inomusimbisa kuti angangove nemukana.
Iyo antihero chikamu cheTravis inofungidzirwa nyore sekusangana kwakakurumbira nezvematongerwo enyika. Iyo gamba chikamu chinooneka kunyangwe mhosva dzake mukudzivirira Iris. Huwandu ndehuya hunhu huri patambo yakamanikana yehunhu, hunokwanisa kugadzirisa nenguva sechiratidzo pakati peanopokana nehurongwa nevakarurama.
Imwe yeaya remakes anopedzisira aviga ayo epakutanga. Kuita kunovhiringidza nekusagadzikana neavo vanodana "gweta, gweta, buda imomo kakonzo". Iko kutsiva kwakajairika kusvika pakuverenga Monte Cristo asi pasina hwaro hwenhetembo kururamisira. Panongova neshungu dzinosiririsa dzekutsiva. Mukuda kwekurwara kwaMax, kwakamisikidzwa naDe Niro, manzwiro aya ekutya kwevasingazive vanonyanya kutyisidzira anosvika kwatiri, evanovenga vakarerekera kuhupenyu hwevamwe, pazvinhu zvevamwe, pamhuri yevamwe sekunge ndizvo. zvavo.
Pane chimwe chinhu muna Robert de Niro, mumasaini ake anodzamisa manzwiro ekusagadzikana. Kushungurudza kwake kunoshamisa uye kunyemwerera kunokweverwa nekugutsikana kweiyo psychopath inofarira chirongwa chake. Nekuti Max akataura hurongwa hwake kwemakore. Anosvika kumwanasikana wegweta rake raakavenga akamuendesa kujeri, anopinda mukati memidzi yemhuri kuti avashatise kusvika aona kuti zvinhu zvose zvinoparara, oparara nemarwadzo anotoita seanobatika.
Mhedzisiro yacho yaigona kunge iri imwe yeaya anokanganisa tsotsi rakazokunda. Asi nyaya yacho inovhara zvakanaka, sezvakaitwa zvinhu kare uye pakupedzisira tinofemawo nekugutsikana.
Kwete kuti ini ndiri kunyanya mune biographical mafirimu. Chiratidzo ichocho che "zvichienderana nezviitiko chaizvo" chinowanzondikanda shure nekuda kwechirevo chayo kupfuura ephemism: "No fucking pfungwa chii chakanyatsoitika asi iwe unodya nembatatisi."
Asi huya iwe, kana iwe ukatora firimu kuti chii, basa rekunyepedzera rine overtones pamusoro peunhu uye remangwana raJake LaMotta, zvino nyaya yacho inotora chikamu chemufirimu mukuru pamusoro penyika yakaoma uye yakaipa yebhokisi, kana kunyanya izvo zvakamutenderedza apo tsiva yaingoperera pamisika mitema nepasi penyika.
Kuwedzera mune iyo pfungwa yemutambi wetsiva sezvo murume akatarisana pamusoro pezvose nemadhimoni ake pakuridza bhero kwega kwega. Hupenyu hwakatenderedzwa nekutenderera nekunzwa kuti bane anogara akagadzirira zvakanyanya kurova mabhomba uye kudzosera kumashure. Mafungiro ekuti kuparara kumwe chete uku kurwa uko, kunyangwe zvese, vamwe havangozezi chete asi vanonakidzwa.
Jake LaMotta mutambi wetsiva Italian-American anodzidzira nesimba kuti ave nhamba yekutanga muhuremu hwepakati. Nerubatsiro rwemukoma wake, Joey, achaona kurota uku kuchizadzika gare gare. Asi mukurumbira nebudiriro zvinotowedzera kuipa. Muchato wake unobva pakuipa uchienda pakuipisisa nekuda kwehupenyu hwake hwepachivande nevamwe vakadzi, godo dzepabonde uye kusatendeka kwemukadzi wake nekuda kwekutsiva, uye kune rumwe rutivi mafia anomumanikidza kugadzirisa kurwa kwavo.